२८ फाल्गुन, २०७६ – Mero UK
Day: २८ फाल्गुन, २०७६
२८ फाल्गुन, २०७६ २८ फाल्गुन, २०७६ / अनलाइन खबर
२८ फागुन, जनकपुरधाम । महोत्तरीमा दुई साताअघि दुई किशोरीलाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले ४ जनालाई पक्राउ गरेको छ । सिमथिला माध्यमिकी परिक्रमा जलेश्वर पुगेकी दुई किशोरीमाथि यही फागुन १५ गते सामूहिक बलात्कार भएको थियो । बलात्कारमा संलग्न ७ जनामध्ये चार जनालाई पक्राउ गरिएको महोत्तरीका प्रहरी प्रमुख, » पुरा समाचार पढ्नुहोस
बच्चालाई काखमा लिएर उनीहरुलाई सुताउनका लागि आमाले सानो स्वरमा बच्चाकै लागि मायाले भरिएको गीत (लोरी) गुन्गुनाउँछिन् । त्यस्ता गीतहरु बच्चालाई उनीहरुका आमाहरुले मात्र होइन, उनीहरुका हजुर आमा, फुपुहरुले सुनाउँछन् । तीनै गीतहरुलाई एउटी छोरीले आफू आमा बनेपछि पुनः आफ्ना सन्तानहरुलाई सुनाउँछिन् । भनिन्छ, साना बच्चाहरुलाई राम्रो निन्द्राका लागि प्राचिन कालदेखि नै आमाहरुले त्यसरी गीत सुनाउँदै …
आमाले गाउने गीत बच्चाहरुका लागि फाइदाजनक Read More »
बलिउडमा निकै रुचाइएको चलचित्र हो, ‘बधाई हो’ । आयुष्मान खुराना, नीना गुप्ता, सान्या मल्होत्राको मुख्य भूमिका रहेको यो चलचित्रले राष्ट्रिय अवार्ड समेत हात पारेको थियो । समीक्षात्मक रुपमा पनि अब्बल बनेको यो चलचित्रले बक्स अफिसमा पनि राम्रो कमाई गरेको थियो । अब भने सोही चलचित्रको सिक्वेल भन्ने भएको छ । सिक्वेल चलचित्रको नाम ‘बधाई दो’ …
‘बधाई दो’मा राजकुमार र भूमी Read More »
नायक राजेश हमालले पर्दामा फर्किने सुरसार गरेका छैनन् । उनले आफै चलचित्र निर्देशन गर्ने चर्चा चलेपनि अझै यो कामले मुर्त रुप भने पाएको छैन । हमालले चलचित्र निर्देशन कहिले गर्छन् भन्ने पनि पक्का छैन । तर, उनलाई चलचित्रको अफर भने कम भएको छैन । नायक हमालले चलचित्र ‘बागमती’मा काम गरेपछि चर्को आलोचना भोगे । यसपछि …
हमाललाई निखिलको ‘आयो भैरव’बाट अफर Read More »
जुन प्रकारले कोरोना भाइरस संसारका विभिन्न देशहरुमा पनि फैलिरहेको छ । त्यो भन्दा पनि यस भाइरससंग सम्बन्धित विभिन्न भ्रमहरु फैलिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा यो रहस्यमय भाइरसको बारेमा दिन-दिनै नयाँ-नयाँ कुराहरु उत्पन्न हुन थालेका छन् । जस्तै- के अत्याधिक चिसो अथवा बरफले यो भाइरसलाई नष्ट गर्न सकिन्छ ? के तातो पानीले नुहाउँदा यो भाइरसबाट बच्न …
कोरोना भाइरसका सम्बन्धका केही महत्वपूर्ण तथ्यहरु Read More »
२८ फागुन, काठमाडौं । चीनका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत डा. महेन्द्र पाण्डेविरुद्ध संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । बुधबार बसेको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको बैठकले पाण्डेविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ । आजको मितिबाट १० दिनको म्यादभित्र पाण्डेविरुद्ध कुनै उजुरी भए दिन सकिने समितिले जनाएको छ । १८ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चीनका लागि नेपाली …
चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत पाण्डेविरुद्ध उजुरी आह्वान Read More »